नेपालमा फस्टाउँदै पुरुष वेश्यालयः कति कमाउन पुरूष वेश्या ? | नेपाल आज
नेपालमा फस्टाउँदै पुरुष वेश्यालयः कति कमाउन पुरूष वेश्या ?
बिहिबार, ०७ मङि्सर २०७४ गते प्रकाशित
पोखरा । लवाई खवाई नै फरक छ । देख्दा हट्टाकट्टा पनि छन । कुरा गराई पनि फरक छ पोखराका २८ बर्षिय मनोज क्षेत्री ९नाम परिवर्तन०को गेटअप हो यो । शहरका पुरुष यौनकर्मी उनको सम्पर्कमा हप्तामा ४र५ जना महिला आउने गर्छन । उनीहरुसंग यौन सम्पर्क पनि हुने गर्छ । धेरैजसो पनि दोहोरीन्छन । अधिकांश महिला उनलाई खोज्दै आउछँहरु भने कतिपयलाई उनी पट्याउँछन् ।
आफुलाई पुरुष ‘यौनकर्मी’ भन्न नरुचाउने उनले तिर्खाएकोलाई प्यास मेटाएको मात्र बताए । ‘मलाई खोज्दै आउँछन उनीहरु प्रायसंग यौन सम्पर्क हुने गर्छ’ एक होटलमा साथीसंगै महिलालाई पर्खिएर बसेका उनले भने–‘कतिलाई त पट्याइन्छ तर धेरै महिलाहरुले खोजेर आउने गर्छन ।’ उनको दैनिकी नै फरक छ ।
हरेक दिन उनको भिन्दै तवरले बित्छ । समय मिलाएर उनीहरुसंग यौन सम्पर्क गर्ने गरेको उनले बताए । मोवाइलबाटै सबै कुराकानी हुने र भेट हुने उनको भनाई छ । उनीहरुले सामान्यदेखि महंगा होटल बुक गर्ने गर्छन । कतिपय विबाहित महिलाहरुले भने परिवारका अन्य सदस्य नभएको मौका छोपेर घर अथवा डेरालाई नै उपयुक्त स्थान बनाउने गरेको पाइन्छ । विबाहित मनोजले छुट्टै व्यवसाय गरेपनि त्यो भने देखाउनको लागि मात्र हो । यौन सन्तुष्ट बनाए बापत्त महिलाहरुबाट पाउने रुपैयाले नै उनलाई घर परिवार चलाउन तथा विभिन्न खर्च गर्नमा सहयोग पु¥याएको छ ।
‘फुर्सदै हुदैन, समय मिलाउनै गाह्रो हुन्छ’ मनोजको आडैमा रहेका अर्का पुरुष यौनकर्मी नवीन गुरुङ ९नाम परिवर्तन०ले भने–‘मोवाइलबाटै सबै कुरा हुन्छ अनि समय मिलाएर होटलतिर गइन्छ ।’ उनीहरु दुवैको सम्पर्कमा धेरैजसो विबाहित महिलाहरु आउने गरेका छन् । ३५÷४० बर्ष उमेरसम्मका महिलाहरु आफ्नो सम्पर्कमा आएको गरेको उनले बताए ।
करिव तीन बर्षको उनको यात्रामा हालसम्म करिव ४ सय महिलाहरुसंग यौन सम्पर्क भएको मनोजले दाबी गरे ।‘मैले शुरु गरेको ३ बर्ष बित्नै लाग्यो’ उनले अगाडि रहेको साथीलाई सोध्दै भने–‘४ सय त काटे होलान ।’ अहिले क्षेत्रीको सम्पर्कमा नियमित १५÷२० जना विबाहित महिला छन् । ग्राहकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढि बिदेश श्रीमान हुनेका श्रीमति रहेका छन् भने अन्य विभिन्न जागिर तथा पेशामा आवद्ध महिला रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।यौनकर्मी भन्ने बित्तिकै मनमा महिलाको तस्बिर आउ“छ ।
सञ्चारमाध्यम लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि महिला यौनकर्मीकै चर्चा हुन्छ । प्रहरी एवं गैरसरकारी संस्थाहµले पनि महिला यौनकर्मीलाई पक्रने तथा उद्दार गर्ने गर्छन । यो अस्तव्यस्तमा पुरुष यौनकर्मी भने सहजै तवरले धन्दा सञ्चालन गरीरहेका छन् । उनिहरुलाई प्रहरीको डर पनि छैन अनि अन्य कसैको झन्झट पनि । पुरुष यौनकर्मीको रेट पारिश्रमिक भने नभएको मनोजले बताए ।
‘हाम्रो कुनै रेट छैन्’ उनले थपे–‘तर महिनामा ३०-४० हजार जति कमाइन्छ ।’ उनीहरुलाई यौन सन्तुष्टि दिए बापत्त कसैले हप्तामा अनि कोहिले एकरदुई महिनामा पैसा र उपहार दिने गरेको उनको भनाई छ । ‘एक विबाहित महिलालाई यौन सन्तुष्टि दिएपछि मैले एक कार समेत उपहार पाँए’ उनले भने–‘यसलाई अब के भन्ने रु यो रेट त होइन नि उपहार हो ।’
अर्का नविनले पनि थपे–‘मैले एक महिलाबाट एक लाखको मोवाइल पाएको छु’ उनले हातको मोवाइल देखाउदै भने–‘यो ६० हजारको मोवाईल पनि एक लाहुरेकी श्रीमतिले दिएकी हुन् ।’ महिलामात्र बेश्या हुदैनन् । यदि हुन्छन् भन्ने लाग्छ भने तपाई गलत हुनुहुन्छ । आजभोली समाजमा महिलामात्र नभएर पुरुष ‘बेश्या’हरु बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।
पुरुषहरु पनि वेश्याको रुपमा व्यवसायमा हाम फालेका छन् । तर, उनीहरु खुल्ला रुपमा नभएर गोप्य रुपमा व्यवसाय अघि बढाइरहेका छन् । पुरुष यौनकर्मीसंग महिलाहरु नै खोज्दै पुग्ने गरेका छन् । कुराकानिकै बिचमा आइपुगेका अर्का पुरुष यौनकर्मी विमल मगर ९नाम परिवर्तन०ले आज भोली पोखरामा यो कुनै नया“ बिषय नै नभएको बताए । ‘यो कुनै नया“ कुरा नै होइन्’ उनले भने–‘हामिलाई खोज्दै आउनेलाई के छाड्ने तनि रु’ उनले उल्टै प्रश्न गरे । उनीहरुको सम्पर्कमा आउनेहरु बढि बिदेशमा श्रीमान हुनेहरु रहेका छन् । कतिपय त यहि पोखरा श्रीमान भएका तर यौन सन्तुष्टि नपाएर उनीहरुलाई खोज्दै आउने गरेको विमलको भनाई छ ।
संगै विभिन्न जागिर तथा पेशामा आवद्ध विबाहितसहित अविबाहित पनि रहेका छन् । ‘२ बर्षमा हालसम्म दुईरतीन सय युवतीहरुहरुसंग यौन सम्पर्क राखेको छु’ विमलले भने–‘खै कताबाट हो फोन गर्दै भेटौं भन्छन अनि कुराकानी भएपछि सबै कामकुरो हुन्छ ।’ कतिपयसंग त माया पनि बसेको मनोजले बताए । ‘एउटी अर्काकि बुढिसंग त माया पनि बस्यो, छुट्नै गाह्रो भयो’ उनले थपे–‘मैले भन्दा नि उसले धेरै माया गरी, बल्ल–बल्ल छुटियो त्यतिबेला धेरै नमज्जा लाग्यो ।’ यस बिषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले केहि जानकारी नभएको बतायो । कास्की प्रहरी प्रमुख एस।पि। शैलेश थापाले पुरुष यौनकर्मीबारे केहि जानकारी नभएको र ठुलो समस्या पनि नभएको बताए । ‘यस बिषयमा केहि कम्प्लेन पनि आएको आएको छैन’ उनले थपे–‘खासै ठुलो समस्या पनि भए जस्तो मलाई लाग्दैन ।’